Tsy misy tampenam-bava eto !
Telo volana latsaka kely nitondrana ny firenena ny filoha ankehitriny. Telo volana tsy hahafaha-mitsara azy amin’izay mety vitany sy tsy vitany angamba, saingy toa efa ahafaha-mamaritra ny politikam-panjakana hitondrana ity firenena iaraha-manana ity.
Telo volana latsaka kely nitondrana ny firenena ny filoha ankehitriny. Telo volana tsy hahafaha-mitsara azy amin’izay mety vitany sy tsy vitany angamba, saingy toa efa ahafaha-mamaritra ny politikam-panjakana hitondrana ity firenena iaraha-manana ity. Amin’izay maha iaraha-manana izay, dia tsy an-dRajoelina sy ny ekipany irery akory i Madagasikara, ka hanaovana izay tian-katao sy izay hitsin’ny loha, ka zon’ny Malagasy rehetra ny miteny sy maneho hevitra eo anatrehan’ny zava-misy sy ny mety ho tsy fanjariana ataon’ny mpitondra.
Mitokona ny rafi-panjakana rehetra. Miverina apetraky ny mpanara-baovao indray ankehitriny izay fanontaniana izay manoloana ireo hetsika manambana teo aloha teo.
Tontosa ihany aloha izany iny omaly ny andron’ny 7 novambra 2018. Androm-pifidianana, ho an’ireo izay namaritra azy ho amin’izay anarana izay. Andro fandatsaham-bato kosa ho an’ireo izay mihevitra fa dingana hafa aloha no tokony natao nialoha ity fifantenana olona iray amina olona miisa 36 hitondra an’i Madagasikara mandritry ny 5 taona ity.
Na inona na inona fanehoan-kevitra sy fomba fijery dia tsy azo lavina kosa ny hoe ratsy fototra tokoa isika. Na ireo nanaiky na ireo nanda ny hanatanterahana iny omaly iny dia samy niombon-kevitra fa mila fanorenana ifotony ny firenena. Na ny ady hevitra nikasika ny fomba tokony nanatanterahana izay resaka fanorenana ifotony izay koa aza anefa, raha tsiahivina, dia azo faritana ihany koa hoe “ratsy fototra” na dia naherin’ny 2 taona aza no nanaovana atrikasa sy fikaonan-doha niarahan’ireo hery politika maro samihafa momba izany. Tsy voafaritra mazava ireo fototra tokony hiaingana amin’ny fanorenana tokony hatao fa samy nanana ny azy daholo. Tsy nahagaga isika raha tonga amina kihon-dalana mandindon-doza toy izao. Iza moa no tsy niaiky fa tsy tomombana, mba tsy hilazana hoe naloto, ny fanomanana izao fifidianana izao? Na ireo dondona tamin’ny hanatanterahana azy iny aza azo antoka fa niombon-kevitra tamin’izany. Tsy nitsahana omaly tontolo andro ny antso an-tariby voaray tamin’ireo olom-pirenena niantefa tamin’ireo haino aman-jery ka hatrany amin’ny CENI nitanteran’izy ireo ny tranga nampiahiahy rehetra nandritr’ity androm-pifidianana ity. Sarina mpifidy mifandrirotra lisitra eny an-tokontanim-birao no niseho tanaty tambazotran-tserasera, sarin’olona mbola miverina mifidy kanefa efa misy ilay marika tsy maty vonoina ny ankihibeny, mpisandoka ho mpiasan’ny vaomieram-pifidianana mitety trano. Isan’ny tranga nampiahiahy mafy koa moa ny fahitan’ireo mpifidy maraina tamina birao sasantsasany ireo vata-fandrotsaham-bato nadiva ho feno sahady ary nisy birao mihitsy aza nahenoana fa mbola tsy dila akory ny mitataovovonana dia efa nahatratra hatrany amin’ny 85% sy 98% ny taham-pahavitrihany. Antony nampiahiahy ny olona manoloana ireo tarehimarika ireo ny hoe sao dia nasolo vata efa ho feno ilay nangarahara teo aloha? Izany rehetra izany dia santionany ihany fa ny fehiny dia hoe mila mijery lavitra sy miala amin’ny fanao mahazatra tamin’ireo fifidianana tany aloha rehetra isika raha tiana ny hanarina ny fototra sy ho tafita.